Ikamelo eliseduze ne-MGU - I-Airbnb
Ikamelo eliseduze ne-MGU
Ikamelo e-ikhaya ibungazwe ngu-Jane
Leli kamelo lokulala elithandekayo linefenisha yedeski, isibani, nomabonakude. Sitholakala enkabeni ye-Fairfax yase-Virginia.
Eduze kwe-Highway I-66, i-I495, nomzila #50, # 29, # 236. Kungamamayela angu-10 ukuya e-Tysons Corner, futhi amamayela angu-20 ukuya e-National Mall e-Washington D.C. Kungakapheli amamayela angu-0.5-1-1, kukhona ihholo ledolobha le-Fairfax, i-Library, i-George Mason University, i-Judicial center, i-World Gym Fairfax, isikhungo sokuthenga, nokuningi. Ukupaka kwamahhala emgwaqeni ongenayo / emgwaqweni.
Le ndawo ilungele umfundi noma uchwepheshe osebenzayo, inikezwa uxhumano lwe-inthanethi olusheshayo lwamahhala, nesiteshi somsebenzi. Ngenxa ye-coronavirus, senza ukunakekelwa okwengeziwe ukuze sibulale amagciwane ezindaweni ezivame ukuthintwa phakathi nokubhukha.
Uzohlala ekamelweni elizimele esitezi esiphansi. Kukhona umbhede ogcwele onezinto zombhede ezintsha, ideski elinesihlalo, i-Roku TV, nekhabethe lezingubo zokugqoka. Igumbi lokugezela elihlanganyelwayo nekhishi elincane (zizwe ukhululekile ukusebenzisa ikhabethe nezikhala zefriji ezigcinelwe wena, ezinelebula ngenombolo yakho yekamelo). Umshini wokuwasha nokomisa mahhala.
Indawo yokuhlala ethulile, ephephile, enkabeni ye-Fairfax yase-Virginia. Kungakapheli amamayela angu-0.5-1, kukhona ihholo ledolobha le-Fairfax, Umtapo wezincwadi, i-George Mason University, isikhungo seJaji, i-World Gym Fairfax, isikhungo sokuthenga, nokuningi. Indawo yokuhlala ilungele ukugijima ekuseni, ukuhamba ebusuku, abafundi abaningi kanye nochwepheshe abasebasha abahlala endaweni, kanye nabantu asebekhulile.